Basanta Basnet: काठमाडौं–दिल्लीको चेपमा मधेसी माग
जारी आन्दोलन त सत्ता–मधेसी मोर्चा दुवै पक्षको ‘फेस–सेभिङ’ मा पुगेर स्थगित हुने लक्षण देखिन थालेका छन्, तर आम मधेसी नेपालीको आत्मसम्मानसँग जोडिएको माथिको प्रश्न समाधान नहँुदासम्म मधेस अशान्त भइरहनेछ ।
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी संविधानमा मधेसीको पहिचान र अधिकार सम्बोधन गर्ने थुप्रै बुँदाहरु समेटिएका छन् । प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन छुटेको, सीमांकन आफूले भनेजस्तो नभएको र संविधानमा आफ्नो भूमिका नदेखिएको मोर्चाको मूल आपत्ति छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकका लागि नागरिकतामा विभेदपूर्ण व्यवस्था रहेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । संविधान मस्यौदामा छुटाइएका नागरिकता, समावेशी–समानुपातिक पद्दति, संघीय प्रदेशको सीमांकन यीमध्ये केही महत्वपूर्ण बुँदा हुन्, जो संविधान विधेयकसम्म आइपुग्दा सच्चिएर आए । तर सत्य बताउने कसले !
अहिले काठमाडौं–मधेस संवादको वातावरण थुनिएको छ । संविधानमा मधेसीले केही पनि पाएका छैनन् भन्ने मजबुनका डिभिडी बाँड्दै केही ‘एक्टिभिस्ट’हरु कुँदिरहेका छन् । स्वयं जनताले चुनीपठाएका प्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा फर्केर सत्य बताउन सकिने अवस्था छैन । मस्यौदा समितिको चलखेलदेखि विधेयकसम्म आइसक्दा मधेसमा तीन दर्जन नागरिक मारिइसकेका थिए । त्यो आगो सार्थक संवादका माध्यमबाट निभाउन काठमाडौंले समयमै गम्भीरता देखाएन ।
देहातमा ढलिरहेका आन्दोलनकारीको मृत्युमा आफ्नो ‘करिअर’ देख्ने अमुक नेताको आकांक्षाका लागि मात्रै भइरहेको छैन, यो आन्दोलन । तर यो अब काठमाडौंको मात्रै प्रतिष्ठाको विषय रहेन, यो नयाँ दिल्लीको समेत भइसक्यो, जुन यसअघिका दुई मधेस आन्दोलनमा यो हदसम्म प्रकट भएको थिएन । सीमापारि भारतको, सीमावारी मधेसीको नाकाबन्दी हँुदै अघि बढेको आन्दोलन समाधान गर्न ४५ औं दिनमा काठमाडौंले सोमबार बल्ल तीन दलीय वार्ता कमिटी बनाएर पहल लियो । मधेसी नेताहरुले यसलाई सकारात्मक प्रयासका रुपमा अथ्र्याउँदै अब आफ्ना पाँच पूर्वशर्त र तीन शर्तमाथि राज्यको प्रष्ट धारणा माग गरेका छन् । आजभोलिमै वार्ताले गति लिने सम्भावना छ, तर संविधान संशोधनको बाटो हुँदै मधेसीका लागि अधिकार थप गर्ने यो आन्दोलनको जस अब मधेसी मोर्चा एक्लैले लिने अवस्था देखा परेन । के यो मधेस र काठमाडौं दुवैको लागि दुर्भाग्यको विषय होइन ?
आफ्नो देशको भूराजनीतिक स्वार्थ र सीमा बिर्सेर केही मानिसहरुले इतिहासको यो कालखण्डमा अतिरिक्त आकांक्षा पाल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालय गुहारेको पनि यो आन्दोलनका बेला प्रष्टै देखियो । यो इतिहासको सन्दर्भ हो, २००७ को क्रान्तिपछि आधुनिक नेपालमा सम्पन्न आजसम्मका हरेक परिवर्तनमा दिल्लीले सानो–ठूलो भाग खोज्दै आयो । त्यसै नजिरका आधारमा दिल्लीको काँधमा चढेर काठमाडौंलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भनी उक्साउने केही ‘नयाँ क्रान्तिकारी’को वास्तविकता समयक्रममा उजागर हुँदै जाला । तर तथ्य यतिमा पूर्ण हुँदैन ।
नयाँ क्रान्तिकारीले पठाएका नौ बुँदेलाई संशोधन गर्दै दिल्लीले आफ्ना भाग खोज्न जारी गरेका सात बुँदा, त्यससँगै जारी नाकाबन्दी सम्पूर्ण सत्य होइन, यो एउटा पाटोमात्रै हो । सत्यको अर्को पाटोचाहिँ यो हो कि, मधेसी र सीमान्तकृतका जायज आकांक्षाहरुको सम्बोधन गरियोस्, संविधानको स्वामित्वको तिनले लिनेछन् भनी काठमाडौंमै तीन दलका केही नेता, नागरिक अगुवा, बौद्धिकसमेतले उठाएका हुन् । यसो भन्नेमा भर्खरै एमाओवादीबाट बहिर्गमित बाबुराम भट्टराईमात्रै थिएनन्, जसलाई फेसबुक स्टयाटस लेखेकै भरमा स्थिति भड्काएको भन्दै लान्छना लगाउन सकियोस् । यसो भन्नेमा कांग्रेस र एमालेका जिम्मेवार नेता, सभासद् र पूर्वसभासद् समेत थिए ।
संविधान बन्नुअघि उनीहरुले जोडतोडका साथ सीमांकनमा संशोधन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण अंगदेखि सबै निकायमा समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वजस्ता माग उठाए । काठमाडौंमा बस्ने पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भअघिल्तिर ती आवाजको सुनुवाई त के, आत्मसम्मान र मर्यादासमेत राखिएन । सीमांकन सच्याउन आग्रह गर्दै संविधानसभा भवनस्थित प्रधानमन्त्रीको च्याम्बर छिर्दैगरेका फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने, ‘किन कैलालीमा मान्छे उतार्नुभएको ? मुख्यमन्त्री नै चाहिएको भए म दिइहाल्थें नि ?’
दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेल, कृष्ण हाछेथुँलगायत प्रबुद्ध नागरिकहरु उपस्थित भेलाहरुमा ती कांग्रेस–एमालेका सभासद्, पूर्वसभासद् र विपक्षी नेताहरुले आफ्नो विवशता सुनाएको यो पंक्तिकारले प्रत्यक्ष देखेको छ । पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि राखे पनि नेतृत्वले पेल्न खोजेको बताउने कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी सभासद्हरुमा काठमाडौंले आँकलन गरेका ‘एजेन्ट’ थिएनन् । तिनको पृष्ठभूमिले त्यसो भन्दैन । पहाडी समुदायको वाङ्मय–व्याकरण बुझ्ने काठमाडौंको सत्ताले सुर्खेत क्षेत्रका माग आन्दोलन सुरु भएको दुई दिनमै समाधान गरिदियो । उता दुई साता अघिदेखि थरुहटमा जारी आन्दोलनको कुनै सुनुवाई भएन । जब कैलालीमा भदौं ७ गते अमानवीय घटनामा सात प्रहरी एक नाबालकको ज्यान गुम्यो, देशविदेशको संवेदना खल्बलियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सम्पूर्ण मर्यादा लत्याउँदै आक्रोशित हुलले त्यो दिन देखाएको उत्तेजनालाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिन्नँ ।
तर त्यसमा घुसेर हिंसामार्फत् खेल्न खोज्ने सानो समूहको स्वार्थलाई नै सबैथोक होझैं गरी, त्यस घटनाका आधारमा थारु मुक्तिको आकांक्षालाई राज्यशक्ति र ‘एजेन्सी’ लगाएर धुलोपिठो पारियो । चुनावमा थारुको मत पाएर काठमाडौं हाँक्न हिँडेकाहरु दृश्यमा कतै देखिएनन्, बरु सीमापारीबाट आएकाहरुको घुसपैठ बताउनेमा स्टालिन शैलीको वामपन्थमा विश्वास गर्ने गृहमन्त्रीदेखि त्यसै मान्यताबाट दीक्षित काठमाडौंको नेतावर्ग/बुद्धिजीवी अघि सर्‍यो ।
पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि भएका २२ बुँदे र आठबुँदे सम्झौतामा उल्लेख मधेस र थरुहट क्षेत्रबहुल सीमांकनलगायत मुख्य बुँदा त यसअघि नै लत्याइएकै थियो । असोज ५ गते भारतीय विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नचिताएको प्रकरण दृश्यमा आयो । त्यस बेलासम्म २९ दिन चलिसकेको तेस्रो मधेस आन्दोलनले लगभग उस्तै बँुदा अघि सार्दा काठमाडौं मौन बसिरह्यो । जब पर्दामा दिल्ली देखियो, त्यसपछि मधेसीको राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाइयो । मधेस आन्दोलनका केही नेता र तिनै अतिरिक्त क्रान्तिकारीका कारण यस्तो हुन पुग्यो । इतिहासमा तिनका नाजायज आकांक्षा र शैलीको दोष एउटा सामान्य मधेसी नागरिकले भुक्तान गर्नुपरिरहेको छ, जसलाई काठमाडौं–दिल्ली प्रभुत्वको खिचातानीसँग कुनै लेनादेना छैन । ऊ त आफूलाई सामान्य जीवनयापन गर्न नदिने तत्वहरु के हुन्, त्यसका विरुद्ध संघर्षरत देखिन्छ । ऊ अरुझैं समान दर्जाको नेपाली हुन चाहन्छ ।
डेढ महिनासम्म मधेसका सहरबजार, स्कुलकलेज, सडक, व्यापारव्यवसाय ठप्प हुँदासम्म काठमाडौंको सत्तामा बसेको सरकार–प्रतिपक्ष संवेदित भएन, बरु साइकल चढ्ने र टुकी बाल्ने धम्की दियो । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जनता–जनताबीच भावनात्मक निकटताको तहमा होइन, केही नेता, दूत र खुफिया सञ्जालको ‘इगो’ का आधारमा परिभाषित गरियो । दिल्लीका तर्फबाट दुई देशबीच पाक्दै गरेको किचलोको आवरणमा संविधान देखाइयो । काठमाडौंका तर्फबाट तीन चौथाई नेपालीका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानमा केको टाउको दुखाई भन्ने डिस्कोर्स हावी गराइयो । तर ९० प्रतिशत बहुमतको पावरवाला चश्माले आफ्ना नागरिकका असन्तुष्टि देख्न सकिएन । व्यक्तिकेन्द्रित प्रचारबाजी र खुफियागिरीमा रत्तिन काठमाडौंको लोकतन्त्र र वामपन्थ दुवैलाई राम्ररी आउँछ, त्यति नै मेहनतका साथ आफ्ना नागरिकसँग संवाद गर्न भने आउँदैन, अथवा मन पर्दैन । त्यति सुझबुझ भइदिएको भए आफ्ना असन्तुष्ट नागरिकको चित्तमा भारतले खेल्नुअघि नै मल्हम लगाउन नेताहरु मधेस/थरुहट झरिसकेका हुन्थे ।
४३ दिनपछि प्रधानमन्त्री कैलाली गए, पहाडी समुदाय नै भेटेर फर्के । अरु नेता त पुग्दै पुगेनन् । ठूलो क्षतिपछि फेरि सम्झौता हुनु नै थियो, हुनेछ । तर यो सम्झौतामा काठमाडौंको हात माथि परेको छैन, जस्तो कि संविधान निर्माणअघि सम्झौता गरेको भए काठमाडौंले जस लिन पाउने थियो । तर मधेसीलाई अरुझैं पहिलो दर्जाको नागरिक बनाउने एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेको यो आन्दोलनमा दिल्लीलाई तान्नु र ऊ तानिनु हामी सबै नेपालीका लागि बिझिरहने प्रश्न भएर इतिहासमा लेखिनेछ ।
लोकतान्त्रिक राज्यको सञ्चालकले सबैभन्दा तल्लो वर्गको असन्तुष्टिलाई बुझ्ने आफ्नै शैली निर्माण गर्नुपर्छ । मधेससँग काठमाडौंका सत्ताधारी र प्रतिपक्षीसमेतले आजसम्म ‘रेस्पोन्स’ गर्ने भाषा बोलेनन्, ‘रियाक्ट’ मात्रै गरिरहे । असफल राजनीति र कुटनीति सञ्चालनको यो तरिका अब बदलिनै पर्छ । दिल्लीको आडमा काठमाडौंलाई खुच्चिङ गर्ने नयाँ क्रान्तिकारीहरुले बुझ्नैपर्छ, राष्ट्रियताको आन्तरिक र बाह्य व्याख्या अलग हुन्छ ।
प्रकाशित: आश्विन १३, २०७२
Posted by Basanta Basnet at 6:26 AM
Pablo (yo) September 30, 2015 at 7:37 AM